Ciidan ka tirsan booliska AMISOM oo ka baxaya Soomaaliya – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTACiidan ka tirsan booliska AMISOM oo ka baxaya Soomaaliya
September 30, 2018 Abdirahman Al-cadaala WARARKA MAANTA Comments Off on Ciidan ka tirsan booliska AMISOM oo ka baxaya Soomaaliya
Saraakiil ka tirsan ciidanka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa dhawaan ka baxaya Soomaaliya, sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska ciidanka AMISOM.
Christine Alalo oo ah ku simaha taliyaha booliska ee AMISOM oo dalka ka baxaya dhammaadka sanadkan ayaa dhammeystay howshii ay u yimaadeen Soomaaliya oo ahayd dhismaha iyo tababarka booliska Soomaaliya.
Ku simaha taliyaha booliska ee AMISOM ayaa waxa ay saraakiishan uga mahadcelisay dadaalka ay muujiyeen muddadii ay shaqadan hayeen oo aan wax tabasho ka imaan.
AMISOM ayaa sheegtay saraakiishan dalka ka baxaya inay ciidanka booliska ka caawiyeen shaqooyinka maalinlaha ah, tababarka, la talinta iyo kala qeyb galka hawlgallada.
Xubnahan ka baxaya Soomaaliya oo tiro ahaan gaaraya 30 sarkaal ayaa waxa ay u kala dhasheen dalalka Uganda, Kenya, Sierra Leone iyo Zambia.
AMISOM ayaa dhawaan sheegtay inay kordhineyso tababarada ciidanka Soomaaliya, si ay ugu diyaar garoobaan la wareegidda ammaanka dalka marka ay dalka ka baxaan.
Galmudug oo xukun ku riday wariye ka hawlgala Dhuusamareeb
514,694 total views, 1,382 views today
514,694 total views, 1,382 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
514,592 total views, 1,382 views today
514,592 total views, 1,382 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
514,618 total views, 1,383 views today
514,618 total views, 1,383 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
514,670 total views, 1,382 views today
514,670 total views, 1,382 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
514,739 total views, 1,382 views today
514,739 total views, 1,382 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]